NYINYISMIT: Billiard Art Game ....
Billiard Art Game ....
ဒီတစ်ခါတော့ သားရဲ့ဂိမ်းချစ်သူ ဘော်ဘော်တွေအတွက်လက် ဆောင်အနေနဲ့ Billiard Art Game တစ်ခုပေးပါ ရစေဗျာ။ အလုပ်တွေ ရှပ်နေတဲ့ ကြားကနေ စာတွေပဲ တင်ဖြစ်တယ်။ သိတဲ့ အတိုင်းပဲလေ နော်။
သားက မအားတာကို ဝါသနာပါလို့ ဆိုက်ရေးနေတာ အလုပ်က တစ်ဖက်နဲ့ ဆိုတော့ မအားတာလည်း ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။
အခုလည်း သားရဲ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ဂိမ်းလေး တင်ပေးပါ တဲ့ နားညီး သက်သာအောင် တင်ပေးလိုက်ပြီနော် ......
ကဲ ....... ပါ ..... စကားများနေတာနဲ့ ညစ်နေရောပေါ့။ ဂိမ်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးမယ်နော် ....
Billiard Art ဘိလိယက် ကစားတာ ဝါသနာပါသော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဆိုင်ကို သွားစရာ မလိုပဲ အိမ်မှာပဲ ကစားလို့ရအောင် အပြင်းပြေ ကစားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
အပြင်မှာ ကစားရသလိုပဲနော် အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒီဂီမ်းလေးကို သူငယ်ချင်းရဲ့စက်ထဲ Install လုပ်ထားပြီး စိတ်တိုင်းကျ အေးအေး ဆေးဆေး အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ နှစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကစားလို့လည်း ရသေးတယ်ဗျာ။ ဒီဇိုင်းတွေလည်း ပုံမှာ ပြထားသလိုပဲနော် ပြောင်းပြီး ကစားလို့ရတယ်ဗျာ။
ဟဲ ဟဲ .... တကယ်လန်းတယ်နော် ... ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုဘူးဗျာ တကယ်ကို လွယ်လွယ်လေး FREE ပေးမှာနော် ... ကြိုက်ရင် Download စေဗျား .......
ခဏလေးဗျာ။ သား ပြောဖို့မေ့နေလို့ Comments လေးတော့ပေးခဲ့လို့ ( ဟီး ဟီး )
ပျော်ရွှင် ပါစေ သူငယ်ချင်းများ
Posted by နေဇော် လင်း at 09:46